भोजपुर घटना वास्तविकता के ? प्रहरी भन्छ : भिडन्त, नेकपा विप्लव भन्छ : दुवैजना प्रहरीबाटै मारिए - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > भोजपुर घटना वास्तविकता के ? प्रहरी भन्छ : भिडन्त, नेकपा विप्लव भन्छ : दुवैजना प्रहरीबाटै मारिए
July 10, 2019 July 10, 2019 GRISHI578
भोजपुर : गत जेठ ७ गते ट्याम्के–मैयुङ गाउँपालिकाको धोद्रे जङ्गलमा प्रहरीको गोली लागेर भोजपुरकै कुदाककाउलेका तीर्थराज घिमिरे ‘राजु’ मारिए। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लागेको २० दिनमै प्रहरीले चलाएको गोली लागेर उनले ज्यान गुमाएका थिए।
तर, विप्लवलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि गोली हानेर हत्या गरेको दाबी विप्लवले गर्दै आएको छ। विप्लवका एक नेता शैलेशले आफ्नो समूहमा रहेका तीर्थलाई प्रहरीले घेरामा हालेपछि समातेर यातना दिइ गोली हानेर हत्या गरेको दाबी गरेका थिए।
आफ्ना कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेपछि हत्या गरेको भन्दै विप्लवले त्यसको बदला लिने योजना सुरुबाटै बनाएको थियो । तर सोलुखम्बुको छेस्काममा प्रहरी चौकी कब्जा गरेको समाचार बाहिरिएसँगै विप्लवका नेता कार्यकर्ताले लुक्नुपर्ने बाध्यता आएको थियो ।
गत जेठ १९ गते छेस्काम चौकी घटनापछि सरकारले सशस्त्र र जनपथको ठुलो टोली उतारेर विप्लवको खोजी थालेको थियो । त्यसक्रममा भोजपुर, संखुवासभा र खोटाङबाट समेत प्रहरी टोली डिएसपीकै कमाण्डमा परिचालित थियो।
प्रहरीको निरन्तर निगरानीका कारण खुम्चिन बाध्य विप्लवका कार्यकर्ता बर्षेझरीसँगै चलायमान भएका थिए। प्रतिकुल मौसमका कारण प्रहरीको गस्ती नियमित हुन नसकेपछि विप्लवका कार्यकर्ताको उपस्थित सदरमुकाम नजिकका गाउँसम्म पुगेको थियो ।
ट्याम्के-मैयुङको धोद्रेमा आफ्ना एक कार्यकर्ताको प्रहरीले ज्यान लिएपछि विप्लवका कार्यकर्ता आक्रमक भएका थिए । यसको पुष्टि असार १८ गते ट्याम्के-मैयुङ–१ को वडा कार्यालयमा आगजनी र तोडफोडले पुष्टि गर्छ ।
त्यही दिन भोजपुरको देउरालीस्थित सौदा चोकमा एउटा घरेलु बम भेटिएको थियो । जसलाई निष्कृय पार्न नेपाली सेनाको २ नम्बर बाहिनी कार्यलयबाट टोली नै आउनु परेको थियो ।
भोजपुर सदरमुकाम भन्दा केही तल शनिबार र बुधबार हटिया लाग्ने गर्छ । उक्त हटियाको पश्चिमतर्फ जनयुद्धको समयमा माओवादीमा हिँडेर भागेकी एक कार्यकर्ताले पाँचधारे होटल चलाइरहेकी छन्।
उक्त होटलमा बुधबार बिहान साढे ८ बजेपछिको समयमा पुगेका थिए विप्लवका ओखलढुंगा सेक्रेटरी निरकुमार राई ‘प्रशान्त’ । उनको घर भोजपुरको साविक बोया गाउँ विकास समिति (हाल षडानन्द नगरपालिका) मा पर्छ ।
उनी अर्का साथीसहित पाँचधारे होटलमा बसेका थिए । प्रहरीको सूचनालाई मान्ने हो भने उनी बिहानै मदिराले मातेको अवस्थामा थिए। प्रशान्त पाँचधारे होटलमै रहेका बेला नेपाल प्रहरीका घुमुवा सञ्जीव राईसहितको सादा पोशाकको टोली होटलमा पस्यो ।
‘होटलमा पसेपछि प्रहरीको सादा पोशाकको टोली र प्रशान्तबीच विवादको अवस्था उत्पन्न भयो’, भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडा भन्छन्, ‘विवादकै क्रममा प्रशान्तले प्रहरी जवान सञ्जीवमाथि गोली हाने। त्यसपछि प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा प्रशान्तको पनि ज्यान गयो।’